एनआरएनए स्वास्थ्य सम्मेलनमा बहस: मुटु, मृगौला तथा मानसिक रोगका जोखिमबाट कसरी बच्ने ? « LiveMandu
एनआरएनए स्वास्थ्य सम्मेलनमा बहस: मुटु, मृगौला तथा मानसिक रोगका जोखिमबाट कसरी बच्ने ?
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार २२:४६
काठमाण्डौ, २ असोज, २०७७ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलनका अवसरमा शुक्रबार ‘वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली आप्रवासीहरुको स्वास्थ्य सवाल र उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
औपचारिक रुपमा सम्मेलन सुरु हुनुपुर्व शुक्रवार भएको पूर्वसत्रमा देश तथा विदेशमा कार्यरत मानसिक रोग विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ तथा मृगौला रोग विशेषज्ञहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानसिक रोग विशेषज्ञ डा प्रभाकर पोख्रेल कोरोना संक्रमण त्रासका कारण मानसिक रोगीहरुलाई थप जोखिम रहेको र आत्महत्या गर्ने प्रवृति बढेको बताउनुहुन्छ । आफ्नो देश छाडेर जानुपर्ने चिन्ताले पनि कतिपयलाई मानसिक समस्या हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ । एकातिर भाषा र कामको चिन्ता र अर्कोतिर परिवारसँग बिछोड हुनुपर्दाको पीडाले विदेशिएका युवाहरु डिम्प्रेशनसम्म पुग्ने गरेको डाः पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डाः निस्हिता पाठक पहिलाको तुलनामा कोभिड महामारीपछि मानसिक रोग बढेको बताउनुहुनछ । धुमपान, मध्यपान गर्ने प्रवृति, कोरोना रोग बारे नबुझ्दा यसमाथि उब्जिएको त्रास तथा गर्भवती महिलाहरुमा पनि त्रासका कारण मानसिक रोग बढको उहाँको भनाई छ । मानसिक समस्याबाट बच्न सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने , अनाबश्यक तनाब लिन नहुने डाः पाठकको भनाई छ । मानसिक रोग लागिसकेपछि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित औषधीको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुटु रोेग विशेषज्ञ डाः सुर्य देवकोटाले मुटु रोगिहरुलाई कोरोना संक्रमणको निकै जोखिम हुने बताउनु भयो । अन्य अबस्थाका ३ प्रतिशत संक्रमितले ज्यान गुमाउने जोखिम रहेपनि मुटुरोगीहरुमा कोरोना संक्रमण हुँदा १० देखि १२ प्रतिशतले ज्यान गुमाउने अबस्था रहने डाः देवकोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
मृगौला रोग विशेषज्ञ डाः मिधान श्रेष्ठ किड्नीका विरामीहरु पनि कोरोना संक्रमणको निकै जोमिमा रहेको बताउनुहुन्छ । किड्नीका विरामीहरुमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुँदा जोखिम रहेको उहाँको तर्क छ ।
फिजिसियन डाः नितेश अर्यालले सञ्चालन गरेको उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा थुप्रै स्वाथ्यकर्मीहरुको उपस्थिति थियो । मानसिक रोेग विशेषज्ञ डा निस्हिता पाठक, मानसिक रोग विशेषज्ञ डाः प्रभाकर पोख्रेल, मुटु रोग विशेषज्ञ डाः सुर्य देवकोटा र मृगौला रोग विशेषज्ञ डा मिधान श्रेष्ठले कार्यक्रममा धारणा राख्नु भएको थियो ।
#गैह्रआवासीय नेपाली संघ
काठमाडाैं। संसद्को विशेष अधिवेशनअघि स्वाब संकलन गरिएका १२ सय ३५ मध्ये १६० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ।